Macruufka 14.5 wuxuu Keeni doonaa Liisaska Ciyaaraha ee Macaamiisha ah in ka badan 100 magaalo oo ku yaal Apple Music | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | | Apple Music, macruufka 14
IOS 14.5 waa cusbooneysiinta weyn ee iOS ee xigta ee ka socota Apple. Dhowr usbuuc hadda, betas ayaa loo bilaabay horumariyeyaasha halkaasoo wararka mustaqbalka lagu soo bandhigo. Kuwaas waxaa ka mid ah suurtagalnimada furitaanka iPhone-ka iyada oo la adeegsanayo Apple Watch, imaatinka in ka badan 200 emoji cusub iyo bilaabista siyaasadda muranka badan leh ee asturnaanta ee App Store. Nidaamka beta 4 ee iOS 14.5 ayaa awood u yeeshay inuu ku arko wararka Muusikada Apple. Xaqiiqdii, kuwii ugu dambeeyay ee la helay ayaa ah bilaabista liisaska caadeysiga ah ee magaalooyinka kaas oo la cusbooneysiin doono maalin kasta.
Apple Music waxay haysaa hawo nadiif ah oo leh astaamo cusub oo ku jira macruufka 14.5
Waxyaabaha cusub ee aan ka hadlayno waxaa baabtiisay Apple sida Jaantusyada Magaalada, Liisaska liiska ku habboon in ka badan 100 magaalo oo ku dhex yaal Appl Music. Heesaha loogu dhageysiga badan yahay waxay soo muuqan doonaan si loo qeexo isbeddellada juqraafi ahaan iyo si toos ah marka loo eego waddan ahaan. Soo helitaanku wuxuu ku mahadsan yahay falanqaynta dhammaystiran ee koodhka isha ee iOS 4 beta 14.5 by 9to5mac. Xeerkani wuxuu soo koobayaa shaqada sida soo socota:
Baadh waxa caan ka ah in ka badan 100 magaalo oo adduunka ah oo leh jaantusyo maalinle ah.
Billie Eilish ayaa ku bixin doonta riwaayad khaas ah khadka tooska ah ee Apple Music ka hor inta aan la soo bandhigin barnaamijkeeda dokumenteriga ah ee TV +
Koodhku kuma jiro magaalooyinka ku raaxeysan doona sheekadan cusub, inkasta oo ay umuuqato inay cadahay in caasimadaha waawayn ee dhamaan wadamada aduunka liis ay yeelan doonaan. Waxaa la fahansan yahay in magaalooyinka lagu kala shaandheyn doono iyadoo lagu saleynayo dalka iyo joogitaanka Apple ee gudaha ama muhiimada ay leedahay magaalada dad ahaan ama baaxad ahaan.
Waxaa la filayaa in Jaantusyada Magaalada ama liiska ciyaaraha ee magaalooyinka si rasmi ah loo sii daayay iyadoo la sii daayo macruufka 14.5. Maaddaama ayan hadda ka muuqan qaybaha kala duwan ee Apple Music xitaa haddii beta lagu rakibay mid ka mid ah aaladaha la jaan qaada. Waxay u egtahay inay sugayaan bilaabashadooda rasmiga ah si ay u bilaabaan iyaga iyo in dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah la ururinayo toddobaadyo ka hor si loo bixiyo liisas tayo leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 14 » IOS 14.5 waxay keeneysaa liiska muusikada ee ka badan 100 magaalo ee Apple Music
Instagram ayaa ka hor istaagi doonta dadka waaweyn inay fariimaha u diraan dhalinyarada aan raacin iyaga
Apple waxay u oggolaaneysaa Ruushka inuu horay u sii rakibo barnaamijyada taleefannada iPhones ee gudaha lagu iibiyo